That's so good, right?: At the Construction Site
ကျွန်တော်က ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီက စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အထူးသဖြင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားပါတယ်။ စားသုံးသူတွေက အပ်နှံလာတဲ့ အဆော်အဦးတွေကို ဆောက်လုပ်ဖို့စီမံကိန်းချ တယ်၊ ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်တယ်၊ အချောသတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတွက် အလုပ်ရပြီပေါ့။ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေကတော့ ကုမ္ပဏီက သေချာစိစစ်ပြီးမှ တင်သွင်းတာဆိုတော့ စိတ်ချရပေမဲ့ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာမှာ စစ်ဆေးခြင်း ကတော့ အလုပ်သမားများနှင့် အင်ဂျီနီယာများရဲ့ သေချာမှုတွေကို စစ်ဆေးရခြင်းပါပဲ။
အခုလောလောဆည် မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ကမ်းပါးမှာ အိမ်ယာအဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်နေ ပါတယ်။ ပုံကြမ်းထုတ် ကတည်းက မြေငလျင်၊ရေဒဏ်၊လေတိုက်ခတ်မှု စသဖြင့်စဉ်းစားတွက်ချက်ပြီးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ၂၄နာရီနီးပါးရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းစတာတွေကြောင့် ၀ယ်ယူလိုသူများကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းက အတော်မြင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်မှာ တော့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှု၊ အားကစားခန်းမထည့်မည့်အခြမ်းက မပြီးစီးသေးမှုတွေကို အကြောင်းကြား လာတဲ့အတွက် စစ်ဆေးကြည့်ရှုဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော်သွားရပါမယ်။
သောကြာနေ့မနက် (၁၁)နာရီမှာ အဆောက်အအုံရှိရာကိုရောက်အသွားမှာတော့ နေမင်းကြီးနှင့်အပြိုင် မျက်လုံးပြူး သွားရလောက် အောင် သဘောကျခဲ့ရပါတယ်။ အဆောက်အဦးကြီးက တကယ့်ကို အကြီးကြီးပါပဲ။ မြေပိုင်ရှင်တွေက တစ်ဦးတည်းမှမဟုတ်တာပဲလေ။ ပြီးတော့ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျီနီယာတွေကိုက ၆ဦးဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်။ မြေပိုင်ရှင်တွေ၊ အခန်းကိုကြိုပွိုင့်နှင့် ၀ယ်ထားသူများက ပြီးစေချင်လှပြီ။ ဒီအခြမ်းကို အချောသပ်ပြီးရင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါး ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ ဆိုဒ်ထဲကိုဝင်သွားတော့ အလုပ်သမား အချို့ သူ့နေရာနဲ့သူ နားနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။ 'ဆိုဒ်ရုံးခန်း'ထဲဝင်သွားတော့ ဆိုဒ်မန်နေဂျာက ဖြစ်ရပ်များကို ရှင်းပြပြီး မကြာခင် ပြီး စီးစေရမယ်လို့ အာမခံတယ်။ သူပေးတဲ့ delivery note ရဲ့အောက်ခြေကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ဆိုင်းထိုးထားတဲ့နေရာက 'ဘရန် ဆိုင်း' တဲ့။ ဘာလူမျိုး ပါလိမ့်။
အခုတာဝန်ကျနေတဲ့ ဆိုဒ်မန်နေဂျာက အဲဒီလက်မှတ်ဟာ မပြီးသေးတဲ့ အားကစားခန်းမဘက်ခြမ်းက တာဝန်ယူတဲ့ ဆိုဒ်မန်နေဂျာလေးရဲ့ လက်မှတ်ပါတဲ့။ အခုလောလောဆယ် သူအပြင်သွားနေတဲ့အတွက် ဆိုဒ်ထဲမှာ သူမရှိပါ။
'မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျာ၊ ဆိုဒ်ထဲလှည့်ပတ်ကြည့်ဖို့ရော၊ အားကစားခန်းမဘက်ကိုသွားကြည့်ဖို့ အားလုံးသိနေတဲ့ အဲဒီဆိုဒ် မန်နေဂျာရဲ့ လက် ထောက်လေးရှိပါတယ်။'
သူ့ဝေါ်ကီတော်ကီလေးကိုထုတ် နှုတ်ခမ်းနဲ့အသာကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုးစကားပြောပြီးနောက်မှာ 'ညီညီ'ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးရောက်လာ တယ် ဆိုဒ်တစ်ခွင်လှည့်လည်ပြသဖို့ပေါ့။ ညီညီဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အသက်(၂၀) လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ဆံပင်အရောင်က နက်မှောင်လို့ မျက် နှာကတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပေမယ့် ခပ်တင်းတင်းမျက်နှာ ထားနဲ့၊ ဘော်ဒီကလည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိသား။ ဆောက် လုပ်ရေး ဆောင်းဦးထုပ်ဆောင်းထားသလို ကုမ္ပဏီလိုဂိုပါ ဂျက်ကက်ကိုတီရှပ်အနွမ်းပေါ်ထပ်ဝတ်ထားလေရဲ့။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီ ကအတို အနားကဖွာနေရော။ ညစ်ပေပေခြေအိတ်တွေနှင့် တွေကိုစွပ်ထားပါရဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကြွက်သားအပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ လူမျိုးတွေ ကို ရှာဖွေ တွေ့ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ထုံးစံကတော့ သူလိုကိုယ်လို လူငယ်လေးတွေပဲကြိုက်တာ။ (အမှန်တကယ် အစစ်အမှန်ကိုပြောရရင် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေကို အကောင်းဆုံးတွေ ထဲက အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ။) ဒါပေမဲ့ ညီညီကျ တော့ ကျွန်တော့် အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသလိုပါ။ ခပ်တင်းတင်းမျက်နှာထား၊ အ၀တ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း၊ မျက်ရစ်မပေါ်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ကြောင့်များလား။
ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုပဲ ဦးထုပ်တစ်ခုဆွဲယူဆောင်းလိုက်ကာ သူနှင့်အတူအပေါ်ထပ်သုံးလွှာဆီကို လှမ်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း၊ အခြေအနေသဘာဝ ပြီးတော့ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ခမ်းနားတောက်ပသော မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့ အလှအပပါ မကျန်ပြောပြပါလေ့။
သူသွားတဲ့နောက်လိုက်ရင်း အလွှာလွှာအထပ်ထပ် သွားလာတာမှာ တစ်ခါတလေ အနီးကပ်ရချိန်မှာတော့ သူ့ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းကို ရှူမိ ရတယ်။ စစချင်းတော့ အတော်မနှစ်မြို့မိပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုဆန်းစစ်မိတော့ နည်းနည်းများ စွဲမက်နေမိသလားပဲ။
ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်လွှာကိုအရောက် မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက အစမသတ်နိုင်သေးတဲ့ အားကစားခန်းမဘက်ခြမ်း။ မိုးရေတွေစိုရွှဲနေ တော့ ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့ နည်းနည်းအန္တရယ်ရှိနေတဲ့သဘောပါ။ သေချာဆန်းစစ်ပြီးလိုအပ်ချက်၊ ဖြစ်နေမှုအခြေအနေတွေကို Notebook မှာရေးမှတ်ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ အောက်ဆုံးအထပ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြချိန်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်က လူတွေ သိပ်မတွေ့ ရတော့။ အင်း..... ကျွန်တော့်အတွက်လည်း လာရောက်ဆန်းစစ်တဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသွားပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ လူငယ်တစ်ယောက်ကျွန်တော် တို့ရှိရာလှမ်းလာပြီး ညီညီ့ကိုမေးတယ် နေ့လည်စာတစ်ခုခုစားချင်ရင် canteen လာခဲ့ပါလားတဲ့။ ဆိုင်က ပိတ်ခါနီးပြီတဲ့။ ဒီနေ့သောကြာ နေ့ဆိုတော့ အားလုံးလုပ်ငန်းခွင်ကို စောစောသိမ်းကျတာလေ။
ညီညီက သူနဲ့အတူ ဆိုဒ် canteen ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အဲဒီနေရာက ဆိုဒ်နဲ့သိပ်မလှမ်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စားဖို့အဆင်ပြေမဲ့ ဟာ တစ်ချို့မှာခဲ့ကြတာပေါ့။ အစားအသောက်တွေရောက်လာဖို့ထိုင်စောင့်နေချိန်မှာ သူက ခပ်တိုးတိုးပြောလေရဲ့ အိမ်သာသွားချင်လို့ တဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း လိုက်မယ်အတူပေါ့။ အမျိုးသားများအတွက် သန့်စင်ခန်းကတစ်ခြားမှာပါ။ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးဗျာ...ဆီးသွား ကြွေကမုတ်က နှစ်ခု၊ အိမ်သာခန်းက သုံးခုထဲရယ်။
ကျွန်တော်က ကြွေကမုတ်တစ်ခုမှာဆီးသွားတော့ သူလည်းဘေးက တစ်ခုမှာရပ်ပြီးသွားသပေါ့။ ညီညီသူ့ဘောင်းဘီတို ကိုလျော့ အောက်ခံဘောင်းဘီကိုဟကာ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်ချိန်မှာတော့ အအံသြကြီးအံ့သြသွားရပါတယ် ကျွန်တော့်မှာ။ It was huge. ပျော့နေတဲ့အချိန်မှာတောင် ၆လက်မခွဲလောက်ရှိတယ်။ အတုတ်ကလည်း ကျွန်တော့်လက်ကောက်ဝတ်နီးပါးဆိုတော့ မျက်လုံးပြူး ချင်စရာ။ ကျွန်တော်အဲဒီအချိန်ဘာများလုပ်မိသလည်း...သိလား။ မမာတစ်ဝတ် မာတစ်ဝက်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို ဘောင်းဘီထဲအသာ ပြန်ထည့် ဇစ်ပိတ်ပြီး လက်ဆေးဖို့ဘေစင်ကိုသွားလေသတည်းပေါ့။ လက်ဆေးရင်း မှန်ကနေတစ်ဆင့်မြင်ရတာက တစ်ဝက်တစ်ပျက် လျော့နေတဲ့ ခါးကဘောင်းဘီကြောင့် တင်းရင်းနေတဲ့ တင်ပါးကြားက ချစ်သူ့လမ်းသွယ်လေးကိုမြင်နေရတယ်။ ကြည့်ကောင်းကောင်း နဲ့ငေးနေတာ သူဆီးသွားပြီးလို့ဘောင်းဘီထဲ သူ့ဟာကိုပြန်ထည့်ဇစ်ပိတ်ချိန်မှာတော့ ဟန်မပျက်ခေါင်းငုံ့ပြီး လက်ဆေးရသပေါ့ဗျာ။
သူဘေစင်မှာ လက်လာဆေးတော့ ကျွန်တော် လက်အခြောက်ခံစက်မှာ လေသလပ်ခံရင်း စကားစမြည်ပြော စပ်စုရပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ canteen ကိုပြန်လာပြီး ကိုယ်စီမှာထားတာတွေကို စားသောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ စားသောက်ရင်းမသိမသာ အောက်ကို ကြည့်နေမိတာမှာ သူ့ငပဲဟာ ခဏနေကထက်စာရင် ပိုကြီးကြီးလာနေသလိုပဲ။ သူ့ဒူးခေါင်းတွေက ကျွန်တော့်ခွဆုံကိုမထိတထိပွတ်သပ် နေမိတာလေ။ ဒါကိုသူသိလား မသိဘူးလား မဆိုသာပေမဲ့ သာယာနေပုံပါ။ ပြောဆိုဖြစ်ကြတဲ့ စကားလမ်းကြောင်းဟာလည်း လက်ထပ် ခြင်းတွေ၊ လက်မထပ်ဘဲအတူနေခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာတွေဖက်ပြောင်းသွားနေပါပေါ့ မသိမသာ။ လက်ထပ်ပြီး အတူနေတဲ့ကိစ္စမှာ ကျွန်တော်က မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ပြောတော့ သူကပြုံးလိုက်ကာ 'No' တဲ့။ ပြီးတော့ 'ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မတိမ်းညွှတ် ဖူးဘူးဗျ အမြဲတမ်းလိုလို....အခု'
သူပြောတဲ့စကားတွေအပေါ် မတုန့်ပြန်မိပေမဲ့ သူ့ဒူးခေါင်းနှင့်ဖိထားတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားက အတင်းတွန်းကန်နေပါရဲ့။ ဘယ်လိုများ အဆုံးသတ်လာမလည်း ကျွန်တော်သိစပြုလာပါပြီ။ ကျွန်တော်မဖယ်ရှားဘဲ ကပ်ထားမိတော့ သူကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကာပြုံးယောင် ယောင်ပြုရင်း 'ညီတို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ ပြောရမလားမသိဘူးဗျာ' ပြောလာပါရဲ့။ မကြားတကြားအသံခပ်တိုးတိုးနဲ့ ၀ဲတဲတဲအသံက ဆက်ပြီးပြောတာက 'come to bed' ဆိုပဲ။
'Yes' လို့ဆိုလိုက်တော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ဒူးကိုအသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း သဘောညီပါတယ်နော်လို့ ထပ်မံအတည်ပြုသည့် သဘောပြသပါတယ်။ ဒီတော့လည်း သူလက်ကိုပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း အသာဖျစ်ညှစ်လိုက်တာပေါ့ နွေးနွေးထွေးထွေး။
'ညီတို့နှစ်ယောက် ခဏလောက်ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ဖို့နေရာက လူလစ်မလစ်မသေချာဘူးဗျ'
သူကပြောသေးတယ် သူသတိရပြီ အခန်းတစ်ခန်းရှိတဲ့နေရာကို။ အဲဒီအခန်းက ယူနီဖောင်းအဟောင်းတွေထားတဲ့အခန်းပါတဲ့။ သူအရင် သွားနှင့်ပြီး အရိပ်အခြေကြည့်မယ်၊ ခဏနေမှ သူ့နောက်လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီး canteen ကနေထွက်သွားပါတော့တယ်။ သူသွားရာနောက်ကို လိုက်ကြည့်မိတော့ အခန်းတစ်ခုထဲ သူဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတာ။ မိနစ်အနည်းငယ်ငြိမ်သက်ပြီးနောက် တံခါးမလေးအသာဟလာကာ သူ့လက်အစုံကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း canteen ကိုစွန့်ခွာကာ သူ့ခြေလှမ်းတွေအတိုင်းလိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ ယူနီဖောင်း စတိုခန်းထဲ ရောက်သွားတော့ အခန်းအလယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မွေ့ယာတစ်ခုခင်းထားတာကို အဆင်သင့်တွေ့ရသလို ဆိုဖာ အစွန်မှာ တီရှပ်နဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီသာပါတဲ့ ညီညီ့ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ 'ကျွန်တော် အချိန်မဖြုန်းချင်လို့ဗျ....ဟဲ' ရယ်ဖြဲဖြဲနဲ့ပြောသေး တယ်။ ကျွန်တော် ပြတင်းတံခါးကနေ အပြင်ဘက်ကို ဘယ်သူတွေရှိမလည်း တစ်ချက်ကြည့်မိတော့ သူက 'Ah, ကြည့်မယ့်လူတွေရှိမယ် လို့မထင်ပါဘူးဗျာ အားလုံးအိမ်ပြန်ကုန်ပြီလေ' ဆိုပြီးတံခါးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။
မွေ့ယာပေါ်ခင်းထားတဲ့ အိပ်ယာခင်းဟာလည်း သင်္ဘောဆေးစက်အချို့နှင့်ပေကျံနေပြီး သန့်စင်ပုံမရ။ ညစ်ပေပေ ထိုကောင်လေး ညီညီ နှင့်ပင်တူမိသေးတော့။ 'Ah well' သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တစ်လွှာခြင်းရှိသမျှချွတ်ပစ်ထားလိုက် တာ ရှင်းကနဲပါပဲ။ တီရှပ်တွေကို ခေါင်းပေါ် မြှောက်ချွတ်လိုက်တော့ အမြှောင်းမြှောင်းထနေတဲ့ ရင်အုပ်တွေပေါ်လာသလို၊ ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးကိုဖြုတ် ချွတ်ပစ်လိုက်တော့လည်း စူပါ ကြီးက ခုံးထလို့ ပျော့နေချိန်ကနှင့်မတူ ထွားလာလိုက်တာ မျက်လုံးပြူးချင်စရာ။
'ငါ့မှာ ပါးစပ်သေးသေးပဲရှိတာကွ၊ မင်းဟာနဲ့ဆန့်ပါ့မလားတောင် မသိဘူးနော်'
'ဟား.....ဟား အဲဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တွေ့ဖူးတဲ့ကောင်တွေက လက်နဲ့ထုပေးတာထက်မပိုကြပါဘူး'
သူ့ခမျာ သဘောတကျကိုဖြစ်လို့ပါ။ ဒီလောက်ထွားတာမြင်မှ မမြင်ဖူးဘဲဥစ္စာ။ မထခင်ကနဲ့ လားလားမှမဆိုင် အတော့်ကိုကြီးလာတဲ့ သူခိုးပဲ သူ့ငပဲက။ ဘေးမှာ အသာလှဲလျောင်းလိုက်ရင်း သတိပြုမိတာက ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ နူးညံ့ကြင်နာမှုမရှိ တက်မက်မှု သာရှိနေ တယ်ဆိုတာပါပဲ။ လိုအပ်လို့ အတွက်ပဲဦးတည်နေကြတာပဲလေ။ နူးညံ့ကြင်နာတဲ့ အနမ်း၊ နွေးထွေးတဲ့ ဖက်တွယ်မှုတွေ အဝေးကရှား။ သူ့ငပဲကို လက်နှင့်အသာဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး ပွတ်သပ်ဖိညှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ဆီကညည်းတွားမှုအချို့ရလိုက်ပါရဲ့။ အရှိန်နည်း နည်းမြှင့်ကာထုပေးလိုက်ပြန်တော့ အဲဒီလောက်ကြီးမမြန်နဲ့ဗျာတဲ့လေ။
'အလုပ်ချိန်မပြီးခင် နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ဆွဲလို့ရအောင်ပြောတာပါ... ဟီး'
ကျွန်တော့်မှာ ရယ်မောပြီး သဘောကျမိသေးတော့တာ။ သွက်နေတဲ့လက်ကို အရှိန်လျော့ပြီး သူ့သဘောကျလုပ်ပေးမိရပေါ့။
သူကလည်းအားကျမခံ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လက်ချောင်းတွေနှင့်ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပေးရင်း တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော့် ခရေပွင့်ကို လက်ခလယ်နှင့် ထိုးထိုးကလိသေးတာ။ အင်း....အဲဒါလည်းဖီးလ်တစ်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်တော့်ခရေပွင့်ကို လက်ခလယ်လေးနှင့် မသိမသာထိုးသွင်းလိုက် ပြန်နှုတ်လိုက်လုပ်ရင်း ဖီးလ်အရှိန်မြင့်လာဟန် ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး အထက်အောက် ကစားပါတော့တယ်။ မာထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မသေးပေမဲ့ သူ့ရဲ့ထွားကြိုင်းတဲ့လက်ကြားမှာ မြှုပ်နေပါရဲ့။
'Oh my, ညီအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားလာပြီဗျာ အကိုထုပေးနေတာကို နည်းနည်းအရှိန်မြှင့်ပေးလို့မရဘူးလား....ရှီး'
သူနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တောင်းဆိုပေမဲ့ မသိကျိုးကျြွံ့ပုထားရင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်းသာ ထုပေးနေလိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာက အမေရဲ့အ လိုလိုက်ခြင်းမခံရတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မူဟန်ဖြစ်နေလိုက်တာများ ရယ်ရတယ်။
'Oh....Please, please faster, faster.'
'ဒါ ဂွင်းထုပေးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ ငါ့အရှိန်နှုန်းက ဒီလောက်ဘဲကွ၊ မပြောင်းပေးနိုင်ဘူး'
ပြောပြီးပြီးခြင်းအရှိန်နှုန်းမပြောင်းဘဲ ဖြည်းဖြည်းသာထုပေး လက်ကစားပေးနေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသွေးအသားတွေ တရှိန်ထိုး တက်ကြွ လာဟန်က အထင်းသားဖြစ်ကာ အသံတွေဟာလည်း ကျယ်လောင်လာတာပေါ့။ 'အာ...အ..အား' ဆိုတဲ့အသံကျယ်ကျယ် နှင့်အတူ အမြှောက်ပစ်ထည့်လိုက်တာ လေထုထဲကို တန်းကနဲ တန်းကနဲပါ။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် climax ဖြစ်တာဒီလောက် အသံကျယ် ကျယ် အော်စရာလား။ အခုမှပဲကြားဖူးရတယ်လေ။ ပန်းထုတ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူ့ငပဲဟာ တစ်ဝက်လောက်ပြန် မာလာ တာဗျ....
'အံ့သြစရာပဲဗျ၊ ခပ်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားတာကလည်း ညီ့ကို ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့တစ်ခုခု ဒါမှ မဟုတ် နှစ်ခုလောက်တော့ သင်ယူခဲ့ရတာပဲဗျ....ဟီး...ဟီး ထပ်ပြီးစမ်းချင်သေးတယ်'
ငါတော့ပြီးခါနီးနေပြီ ဒါပေမဲ့ မင်းသက်လုံကောင်းသေးရင် ၊ ငါ့ကိုလုပ်ချင်နေရင် မင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ ကျွန်တော် သူ့ကိုပြောမိရပါတယ်။
'ကောင်လေးတွေတော်တော်များများက ကျွန်တော့်ငပဲဆိုက်ကိုမြင်သွားကြရင် အဲဒီလိုနေပေးဖို့ငြင်းဆိုကြရော၊ ပြဿနာက ကျွန်တော့်မှာ ချောဆီမရှိတာပဲဗျ'
'Oh, ငါအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ယူလာတယ် အရေးပေါ်သုံးရအောင်လို့'
ပြောပြီးပြီးခြင်းထရပ်လိုက်ကာ ဂျက်ကက်အိတ်ထဲက အဖော်ချောဆီနှစ်ထုပ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ 'တစ်ထုပ်က မင်းအတွက် တစ်ထုပ်က ငါ့အတွက'်။ ကျွန်တော့်အထုပ်ကိုဖောက် ခရေတွင်းဝမှာ တစ်ထုပ်စာလုံးညှစ်ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါမှ သူ့ပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းလက် ခံနိုင်မှာ မဟုတ်လား။သူကတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းပေါ်အကုန်ညှစ်ချလိုက် ရင်းတစ်ချောင်းလုံးကိုမံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုမျက် နှာချင်းဆိုင်ပဲ ချချင်ဟန်တူရဲ့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို တောင့်တင်းလှတဲ့ သူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်တယ်။ ခပ်ဟဟဖြစ်သွားတဲ့ ခရေပွင့်ထဲ သူ့ငပဲကိုခပ်သာသာတွန်းထိုးရင်း စတင်လှုပ်ရှားပါပြီ မကြာခင်။
'ခဏ....ခဏလေး ငါနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်အနေအထား၊ ဒါမှတစ်ချောင်းလုံးဝင်မှာ'
'ဒါဆို ကျွန်တော်လည်း ခဏလေးပြောဦးမယ်၊ ပထမက ကျွန်တော်တို့တစ်မနက်ခင်းလုံးအတူရှိနေကြတာ အခုထိနာမည်မသိသေးဘူး၊ ဒုတိယက ညီလုပ်တာ နာသွားရင် ချက်ချင်းပြောနော် ဆွဲထုတ်လို့ရအောင်'
'ငါ့နာမည်က Kevin ၊ ပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မင်းထက်ကြီးတာတွေနှင့် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကွ၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပေါ့'
ဦးဆုံးအနေနဲ့ သူ့ခပ်ထွားထွားငပဲရဲ့သွေးတိုးစမ်းဝင်လာတာကို ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ ထိုးထည့်ကြည့်လိုက် ပြန်လျှော့လိုက်သူလုပ် နေတာလေ ခဏတော့ သူခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုးထည့်ဖို့စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်နေဟန်တူပါရဲ့။
သူနည်းနည်းထိုးသွင်းလာတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသူ့ငပဲဝင်လာတာကို အသာဖိသွင်းလိုက်ရင်း ကြိုဆိုရသည်ပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းရော တစ်ချောင်းလုံးပါ တောင်ကြားလမ်းက ဂူထဲကိုဝင်ရောက်သွားလေသတည်းပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း အံ့သြကျေနပ် ရပါတယ် မနာမကျင်အဆင်ပြေသွားရတာကို။ ညင်သာစွာ အထုတ်အသွင်းလုပ်ရင်း သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းပွင့်လာတယ် ကျေနပ်ပြုံး ပေါ့။
သူ့ငပဲထွားထွားကို အသာပြန်ဆွဲနှုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ အုံလိုက်များပါသွားသလားထင်ရအောင်ခံစားရလိုက်တယ် ပြည့်သိပ်နေတာဆို တော့။ ချောဆီကတော်တော်တော့ အလုပ်ဖြစ်တာပါပဲ။သူတစ်ချက်တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆိမ့်ဆိမ့်သွားရသလို သူလည်းပဲ ဖီးလ် အပြည့်ယူနေပါလေ့။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာချိန်မှာတော့ သူ့အသက်ရှူသံတွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တော့သလို သူ့နှုတ်ခမ်းကလည်း အော်ညည်းသံကကျယ် လာရပြီ။ ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဖာသာလက်ကစားနေတာ အရှိန်ရနေပြီပေါ့။
ညီညီ့နှုတ်ဖျားက အသံမြင့်သွားပြီး ကျွန်တော့်ဂူထဲကို ကော့ကော့ပြီး လရည်တွေသွင်းလိုက်တော့တာ။ ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်မရှေး မနှောင်း ပန်းထည့်လိုက်တာ ရင်ဘတ်တွေဗိုက်သားတွေပေါ်ရွှဲကနဲ။ တံခါးမကရောက်လာတဲ့ ကောင်လေးကိုနှစ်ဦးသား လျစ်လျူရှုထား မိကြရင်းဖြစ်နေကြတာလေ။
'ညီညီ မင်းငပဲဆိုက်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့လူကိုတွေ့သွားပြီပေါ့ဟုတ်လား? အံ့သြစရာပဲကွာ' အဲဒီကောင်လေး အခန်းထဲဝင်လာပြီး ကုလားထိုင်မှာထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေပါရော
'Can I see your ticket?' ညီညီ ရှက်ရယ်ရယ်ရင်း အဲဒီကောင်လေးကို လှမ်းစလိုက်သေးတယ်။
'Kev, သူကရာဇာလေ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း'
'တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ရာဇာ၊ ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုဆိုရတာဆောရီးနော်' ခပ်ပျော်ပျော်ပဲလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ရာဇာတဲ့ အရပ်၅ပေ ၆လောက်ရှိမည့်ကောင်ငယ်လေး၊ ကြည့်လို့အဆင်ပြေပြီး ညီညီထက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့။ သူ့ငပဲကတော့ ဘောင်းဘီထဲမှာ ထိုးထိုး ထောင်ထောင်နဲ့ ပစ်ကွင်းရှာနေဟန်။
'ငါ့ကောင်မင်းလည်း ငါတို့လို နို့ညှစ်ဖို့ဝါသနာပါလား'
'မင်းမမေးခင်ကတည်းကပဲ၊ ငြင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိ' ပြောပြောဆိုဆို အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပါတော့တယ်။
ကောင်ငယ်လေးက ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကြား အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းရင်း ကျွန်တော်တို့မျက်ဝန်းတွေကို ဘယ်လိုလည်း လှမ်းအမေးထုတ် တယ်။ ညီညီက ကျွန်တော့်နားအသာကပ်ရင်း 'အစ်ကိုက ကျွန်တော့်ဧည့်သည်နော်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလုပ်ပေးသလို သူ့ကိုလည်း အခွင့်ပေးနိုင်မလား?'
ကျွန်တော် မိုးပေါ်ချိန်နေတဲ့ ရာဇာ့ညီဘွားကို အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း သူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်းမေးလိုက်တယ်။ အလွန်ဆုံး ရှိမှ အသက်၁၆နှစ်လောက်ပဲလို့ သံသယရှိနေလို့လေ။
'ကျွန်တော့်အသက် ၁၈နှစ်ရှိပြီဗျ၊ လူတိုင်းက ကျွန်တော့်ကိုကလေးလို့ပဲ ထင်နေတတ်ကြတော့ တကယ့်စိတ်ကုန်စရာဗျ'
၅လက်မခွဲလောက်ရှိတဲ့ သူ့ငပဲလေးကို ညင်ညင်သာသာဆွဲနှုတ်ပေးလိုက်တော့ သူ့ရင်ခုန်သံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေကို တဒုန်း ဒုန်း စကြားရတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့ခြေချောင်းလေးတွေ တွန့်ကွေးစပြုလာပြီ။ ပြီးတော့မယ် လို့ကျွန်တော်တွေးမိ ရပေါ့။
'Oh, yes' 'ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးထူပူလာပြီဗျာ ပြီးတော့မယ်.......အာ...အ မြန်မြန် မြန်မြန်'
အရှိန်နှုန်းမပြောင်းမှန်တန်းလေးပဲ ထုပေးနေတာမှာ သူ့တင်ပါးလေးတွေ ကျစ်သွားလိုက် လျော့သွားလိုက်ဖြစ်နေတာကို မြင်ရတယ်။ သူ့ climax ရောက်ဖို့ အရှိန်မြှင့်နေဟန်တူပါ့။ 'မြန်မြန်၊ မြန်မြန်' ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေထဲ စိုက်ကြည့်ရင်းတောင်းဆိုနေတော့ သူ့ကိုခေါင်း ငြိမ့်ပြမိပေါ့။
'အကိုလုပ်တာကို အသာငြိမ်နေပါကွာ ပြီးရင်မင်းကြိုက်မှာပါ။'
သူ့ကျောပြင်ဟာ တုန်ခါပြီး မျက်နှာပေါ်မှာလည်း ချွေးစက်အချို့စိမ့်ထွက်လာတယ်။ ၀က်ပေါက်စလေးတစ်ကောင် အော်ညည်းသံလို အသက်ရှူသံလို ဖြစ်စပြုလာတယ်။ နောက်မှာတော့ သူ့ညည်းတွားသံတွေ အသံတွေ ကျယ်လာတော့တာပေါ့။
'Oooooooooooooohhh, Oooooooooohhhh, Aaaaaahhhh, Yes....YES.....oh, YEESSS'
ကောင်ငယ်လေး သူ့အရည်တွေကို ပန်းထည့်လိုက်တာ သူ့ခေါင်းပေါ်ကိုကျော်ပြီး ပြတင်းပေါက်က မှန်ချပ်တွေကို ပက်ကနဲ ပက်ကနဲ။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ ကျေနပ်မှုနဲ့အတူ 'Oh, thank you, thank you, thank you' တဲ့သူ့ခမျာမောလျသံနှင့် ရွတ်ဆိုလေရဲ့။
သူလေးရဲ့ဟန်က သေမင်းနှုတ်ခမ်းဝက လွတ်လာသလိုပါပဲ။ အတန်ကြာမျက်ဝန်းတွေမှေးမှိတ်သွားရင်း ပြန်ပွင့်လာကာ ကျွန်တော့်ဘက် လှိမ့်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို အသာအနမ်းပွင့်ခြွေတယ်။
အစ်ကိုအတော်ဆိုးတဲ့သူပဲ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်
'Ya, ငါလည်း အဲဒီလိုခံစားခဲ့ရတာကွ'
ညီညီက ထောက်ခံမှုပေးရင်း တဘက်တစ်ထည်ကို ထရှာလေရဲ့။ သုံးဦးသား အိပ်ယာကထလိုက်ရင်း ရလာတဲ့ တဘက်အစုတ်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြတာပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ ညစ်ပတ်တာတွေဘာတွေ ဂရုစိုက်မနေကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းပြီးသွားကြပြီး နောက် မလှမ်းမကမ်းမှာချထားတဲ့ ပလတ်စတစ်ကုလားထိုင်တွေပေါ်မှာ ကိုယ်စီထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။ အခုမှပဲ ပုံမှန်အသက်ရှူဖြစ်ရတယ်။ ခုံတွေလွတ်နေပေမဲ့ ရာဇာလေးက ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ထိုင် ရင်ခွင်ထဲမှီကာ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွထပ်နမ်းကာ 'Thanks again' တဲ့ပြော ပြန်ရော။
ညီညီတစ်ယောက် အိပ်ယာခင်းတွေကိုစုပြီးသိမ်း၊ အခန်းထဲနေသားတကျလုပ်ပြီးနောက် သုံးယောက်သားအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြ ပါတယ်။
'အား...အခုမှတွေးမိတယ် တော်တော်သောင်းကျန်းတဲ့ ငါပါလားနော်၊ အလုပ်အတွက်လာတဲ့ဟာကို'
'အခုမှသိလား?' ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရယ်မောလိုက်မိကြပါရော။
အ၀တ်အစားတွေဝတ်ဆင်ကြပြီးနောက် ဆိုဒ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ် အတူတူပေါ့။ ကျွန်တော် သူတို့ကို အနီးအနားကစား သောက်ဆိုင်တစ်ခုခုမှာ သွားပြီးဗိုက်ဖြည့်ကြရအောင်ပြောဆို လိုက်ပြီး အဆင်ပြေမယ့်ဆိုင်ရှာထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သုံးယောက်သား ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်ရှုပ်ခဲ့ကြပြီး ပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့ အနားယူကြမယ်လေ။
Wrote by Alex Aung (13 February 2010)
Posted by Alex Aung at 6:31 PM
ဂေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် By ဖြိုး သဲလေး
Debate Letter to Eleven News articles from Mr.Aung...
News Articles from Eleven Journal